वीरेन्द्रप्रसाद भट्ट | गृहपृष्ठ - Part 2
वीरेन्द्रप्रसाद भट्ट Articles 78
प्रदेश समाचार 141 views
धनगढी । वार्षिक २० हजार गिवावाट विद्युत् उत्पादन अनुमान गरिएको १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी परियोजना अध्ययनमै सीमित बन्न पुगेको छ । ५ दशकअघि परियोजना निर्माणका लागि अध्ययन...	बिस्तृतमा
प्रदेश समाचार 73 views
धनगढी । कैलालीको शान्तिपुर बसर जलविद्युत् आयोजना, ठुलीगाडको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । सन् २०१३ मा डीपीआर तयार भएको आयोजना निर्माणका लागि अनुदान स्वीकृतसमेत भइसकेको थियो । तर, शान्तिपुर बसर उ...	बिस्तृतमा
बजार 100 views
धनगढी । प्रदेश–७ का दुई औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर तयार भएको छ । सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कैलाली र कञ्चनपुरमा घोषणा गरेपछि दुवै औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर...	बिस्तृतमा
ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैङ्कलाई ज्ञापनपत्र
प्रदेश समाचार 296 views
साउन २७, धनगढी । बैङ्कको ब्याजदर घटाउन माग गर्दै कैलाली चेम्बर अफ कमर्श र गोदावरी चेम्बर अफ कमर्शले नेपाल राष्ट्र बैङ्क क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ब्याजदर वृद्धिले...	बिस्तृतमा
प्रदेश प्रहरी गठनका लागि कानून मन्त्रालयलाई स्वीकृति
प्रदेश समाचार 71 views
धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ को सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, निय...	बिस्तृतमा
महाकाली सिँचाइ आयोजनाको निर्माण सुस्त
धनगढी । प्रदेश नम्बर ७मा निर्माणाधीन महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको काम सुस्त देखिएको छ । आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर वीरसिंह धामीका अनुसार सो आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत मूल नहरको क...	बिस्तृतमा
गेटा मेडिकल कलेज निर्माण : रू. १ अर्ब २५ करोड विनियोजन
धनगढी । सरकारी स्वामित्वमा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रू. १ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति धनगढीका अनुसार गत आवभन...	बिस्तृतमा
‘कैलालीका वन’ वार्षिक ३ अर्ब आम्दानी गर्न सकिने : विज्ञ
धनगढी । कैलालीका वनहरूबाट वार्षिक ३ अर्ब आम्दानी गर्न सकिने वनविज्ञ डा. एनपी यादवले बताएका छन् । वर्षमा ३४ लाख १० हजार क्यूफीट काठबाट उक्त आम्दानी गर्न सकिने उनको अनुमान छ । ‘जिल्लामा रहेको...	बिस्तृतमा
नवजीवन सहकारीको मुनाफा १२ करोड १८ लाख
साउन १, धनगढी । नवजीवन सहकरी संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को कुल करोबारबाट रू. १२ करोड १८ लाख ८३ हजार मुनाफा आर्जन गरेको छ । कैलालीको धनगढीमा रहेको केन्द्रिय कार्यालयसहित पाँचओटा शा...	बिस्तृतमा
धनगढी विमानस्थल : ३० वर्षे गुरुयोजना बनाइँदै
धनगढी । ७ नम्बर प्रदेशको सञ्चालनमा रहेको एकमात्र धनगढी विमानस्थलको ३० वर्षे गुरुयोजना बनाउन लागिएको छ । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको धनगढी विमानस्थल कार्यालयले बताएको छ । ६ महीन...	बिस्तृतमा